China Off White Flwoer Jacquard China Manufacturers & Suppliers & Factory
Off White Flwoer Jacquard - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Off White Flwoer Jacquard)
Indwangu emhlophe ye-Silk Floral Brocade
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. Indwangu yethu yesilika emhlophe ihlanganisa iphethini ye-jacquard, indwangu ebunjiwe yejometri, insimbi yejacquard yensimbi nokunye. Lesi sitayela osibukayo yi-jacqard...
jacquard okusho ukuthi i-jacquard loom
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. I-jacquard yethu yekotoni yokuphrinta ihlanganisa i-flower iphethini jacquard, indwangu enamaphethini wejometri, indwangu yejacquard yensimbi nokunye. Lesi sitayela...
Indwangu yeJacquard Bedding Upholstery
Indwangu eBrown Flower uJacquard Umbhalo Ogqokiwe yenziwe wakhiwa ngephethini efekethisiwe lapho izindwangu zihlanganiswa phakathi kwe-warp ne-weft. Amaphethini amahle ahlukahlukene anjengezimbali, izinyoni, izinhlanzi, izinambuzane nezilo, njll. Angalulwa kwiJacquard Textured Fabric. Izinto zokusetshenziswa...
Indwangu yeJacquard Weave Curtains
Indwangu ekhanyayo ye-Green Green Floral Jacquard
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. I-jacquard yethu eluhlaza okwesibhakabhaka enemibala eluhlaza imboza iphethini le-jacquard, indwangu enamaphethini wejometri, indwangu yejacquard yensimbi nokunye. Lesi...
IBlack Gold Silk Brocade Jacquard emnyama
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. Indwangu yethu emnyama yokuphrinta embozwe kahle ifaka iphethini le-jacquard, indwangu eyakhiwe ngejometri, indwangu yejacquard yensimbi nokunye. Lesi sitayela osibukayo...
I-Black White Cotton Phrinta Jacquard
I-White Cotton Silke Jacquard
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. Incwajana yethu emhlophe embozwe iphethini le-jacquard, indwangu eyakhiwe ngejometri, indwangu yejacquard yensimbi nokunye. Lesi sitayela osibukayo yi-jacqard yesilika...
I-Beige Cotton Brocade Jacquard Indwangu
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. I-jacquard yethu yekotoni ye-beige ihlanganisa i-jacquard yamaphethini wezimbali, indwangu ye-geometric iphethini ehlanganisiwe, i-metallic yarn jacquard nokunye. Lesi...
Indwangu enemibala enemibala kaPotton uJacquard
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. Incwajana yethu eluhlaza ekotini ihlanganisa i-flower iphethini jacquard, indwangu enamaphethini wejometri, indwangu yejacquard yensimbi nokunye. Lesi sitayela osibukayo...
I-Snow White Silk Brocade
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. Indwangu yethu yeqhwa elimhlophe leqhwa limboza iphethini le-jacquard, indwangu ye-geometric iphethini, indwangu yejacquard yensimbi nokunye. Lesi sitayela osibukayo...
Indwangu ye-Silke Stripe Jacquard yeGolide
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. Incwajana yethu yesilika yegolide ifukamela iphethini le-jacquard, indwangu eyakhiwe ngejometri, indwangu yejacquard yensimbi nokunye. Lesi sitayela osibukayo yi-jacqard...
I-Snow White Floral Phrinta Jacquard
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. I-jacquard yethu emhlophe yeqhwa imboza iphethini le-jacquard, indwangu enamapheshana wejometri, insimbi yejacquard yensimbi nokunye. Lesi sitayela osibukayo yi-jacqard...
I-White Floral Decor Jacquard
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. I-jacqard yethu yesilika emhlophe ihlanganisa i-flower iphethini jacquard, indwangu enamaphethini wejometri, indwangu yejacquard yensimbi nokunye. Lesi sitayela osibukayo...
Isitayela Sombali Esimnandi SaseJacquard
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. IJacquard yethu ihlanganisa i-flower iphethini jacquard, indwangu enamaphethini wejometri, indwangu yejacquard yensimbi nokunye. Lesi sitayela osibukayo yi-Super Gold...
Imibala eminingi uJacquard weKhompiyutha
IGolden Black Crystal Jacquard
I-Cream Colour Gold Whisker Jacquard
I-Sliver Wing Light Jacquard
Blue Purple Izimbali Mesh Jacquard
I-Pink Soft Clean Jacquard
Knitting Coarse Carpet uJacquard
Indwangu ye-Pink Rhinestion Handwork Embroidery
Off White Flwoer Jacquard
I-White Silver Jacquard
Blue Flower Jacquard
IGolide Flower Jacquard
I-Red Flower Jacquard
I-White Cotton Jacquard
I-Snow White Jacquard
I-Pink Floral Jacquard